Animal Dictyokaulez (anụ ụlọ): ọrịa ọgwụ, usoro mmepe, ọgwụgwọ - Anumanu - 2020
Otu esi emeso dictyocaulosis na ehi
Ịbanye n'ime ahụ mmadụ na mmiri ara ehi na anụ, ikpuru apụghị inye onwe ha ogologo oge ma n'otu oge ahụ mebie akụkụ ahụ. Anụ anụ si n'aka ndị agbata obi parasitic. Iji zere nkwụsị nke arụpụta ihe ya, yana ọnwụ na nsogbu ahụ ike, onye ọrụ ugbo chọrọ ịma ihe ngosi nke ọrụ dị mkpa nke nje ndị kasị dị ize ndụ, usoro nke ọrịa na ọgwụgwọ. Otu n'ime ọrịa ndị na-ebute anụ ahụ na-efe efe bụ dictyocaulosis, nke a ga-atụle n'okpuru ebe a.
Ndị na-elekọta ụlọ na mmepe mmepe
Isi mmalite na ụzọ nke ọrịa
Mgbanwe mgbanwe nke ọrịa
Ezi nri na ịgbara
Ogwu ogwu ogwu
Kedu Dictyocaulosis na anụ?
Nke a bụ ọrịa helminthic nke obere ruminants buru ibu, nke sitere na nchịkọta parasitic nke ezinụlọ Dictyocaulidae. Ozugbo anụ anụmanụ ahụ na-eme, a na-achọpụta ụdị ọrịa ndị ahụ na mpaghara ndị na-esi na broncho-tracheal, na-eme ka ọrụ ha dị oké mkpa iji kwụsị azụ na mmepe nke anụ ụlọ, nkwụsị ngwa ngwa nke arụpụtaghị na anụ ụlọ. Ọrịa ahụ agbasawo n'ọtụtụ ebe dị n'ebe ugwu na mpaghara etiti obodo nke Eurasia, ụyọkọ dictyocaulus gosipụtara onwe ha na-adịghị arụsi ọrụ ike na mpaghara ndịda ebe ndịda.
Ị ma? Dị ka Òtù Ahụ Ike Ụwa si kwuo, kwa afọ ọ bụla mmadụ abụọ nọ na mbara ụwa na-ebute otu n'ime atọ ndị isi helminths, nke na-eduga n'ime enterobiosis (1.2 ndị mmadụ mmadụ), ndị na-asọ oyi (900 nde) na trichocephalosis (ruo 700 nde).
Ọpụpụ, paramitic nematodes bụ nnọọ inconspicuous. Ha nwere akpụ ọcha na-acha ahụ ọkụ nke nwere ogologo mita 3 ruo 15. Dị ka iwu nke azụ ha na ọkpụkpụ aka ha, ndị na-agwọ ọrịa na-amata ọdịiche dị iche iche nke akụkụ dị iche iche:
Dictyocaulus filaria - mgbe mgbe, ha na-ebunye obere anụ ụlọ na-egbu anụ, nke a na-ehi ụra site na 8 ruo 15 cm, ọkpụkpụ nke 0.35 ruo 0, 60 mm, nwere akwa odo-agba aja na spicules ruo 0.272 mm n'ogologo na nkwụsị azụ;
Dictyocaulus viviparus - ha dị ntakịrị karịa ha, ha na-ejikarị ụdị nha mara ha, ma ha enweghị ọdịdị azụ, ọdịdị dị n'ihu ihu nke ahụ enweghị ụdị bọtịnụ.
Ụzọ ndụ nke larvae nke Dictyocaulus viviparus
N'ịbanye n'anụ ehi, ụmụ nwanyị nematode na-ahụ n'ime akụkụ nke akụkụ iku ume, ebe ha na-eme egg-laying. N'ihe usoro mgbanwe nke ikuku, ụkwara ma na-ehicha, ntanetị anụ na-abanye akụkụ nke eriri afọ. N'ọdịnihu, akụkụ nke ọkpụkpụ dictyocaulus hatched, ọbụna n'oge mbụ nke mmepe ha, na-apụta site na ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa tinyere feces. Ihe ụfọdụ na-adịghị mma, na-egbochi akụkụ ahụ dị nsị, na-abanye na gburugburu ebe obibi si n'oghere imi na oghere ọnụ nke anụ ahụ na-ebute ọrịa mgbe ọ na-arahụ ma na-eri nri.
Ị ma? Na Russia, nsogbu nke helminth na-adaba na ugboro ole na-arịa ọrịa ọrịa, mgbe ọ bụla na Europe, onye ọ bụla nke atọ bu oria.
N'okpuru ọnọdụ okpomọkụ + 20 ... +27 ° C na ikuku ikuku n'elu 55%, parasitic larvae nwere ahụmahụ okpukpu abụọ, mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-emerụ. Iji mee nke a, ọ ga-adị mkpa ka ụbọchị izu 3 ruo 10 gafee. Mgbe temometa tụlee n'okpuru + 10 Celsius C ma ọ bụ ịrị elu + 30 Celsius C, dictyocaulus anaghị emepe. Usoro ndụ nke pathogens na-aga n'ihu mgbe anụmanụ na-eloda ha na ebe ịta nri ma ọ bụ ebe mmiri. N'ịchọpụta onwe ya na ebe dị mma, nje ndị ọzọ na-ahọrọ tractụm tract. Akụkụ ikpuru nke na-anọgide n'anụ ahụ nke oria, tinyere ọbara na lymph, na-agbasa n'ime ahụ. Akpa ume na-ata ahụhụ kachasị n'ihi na ihe ndị na-adịghị na-emetụta bronchi. Mgbe otu ọnwa gasịchara, ikpuru na-eto eto, nke na-enye ha ohere ịmepụta ọgbọ ọhụrụ.
Iji mee ka ndị na-ahụ maka ọgwụ mgbochi na-ebute mwakpo dictyocauline, ọ ga-ezuru ya ịṅụ ya site n'ite mmiri na-emighị emeri, nakwa ka ọ na-enye ya ahịhịa sitere na ịta ahịhịa mmiri. Mgbasa ọrịa ahụ na-esonyere mmiri ozuzo, idei mmiri na fungi.
Ọ dị mkpa! N'ime ọrụ ha dị oké mkpa, ikpuru na-ewepụta ihe pụrụ iche - toxoids, nke bụ ihe ndị dị ike na ihe ndị na-edozi ahụ..
Achọpụtala na ihe kachasị ọrụ nke dictyocauluses parasitic na-amalite na ngwụsị n'oge okpomọkụ na n'oge mgbụsị akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ, ọnụ ọgụgụ mkparụ ugboro ugboro na - apụta na ọkara nke mbido mmiri. Ọ bụ ihe na-egosi na enweghi nsogbu ọ bụla n'etiti ndị na-agba obere na nnukwu. Ọtụtụ ihe ndị na-enye helminthic na-ejikarị ụmụ na-eto eto ma na-ebi n'ime ozu ụmụ ehi maka ihe dịka otu afọ. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ihe ize ndụ nke ọrịa dị elu na ebe ndị a:
mmiri ide mmiri;
ebe ịta nri (karịsịa mgbe igirigi ma ọ bụ mmiri ozuzo);
obere ọnụ, ọdọ mmiri na mmiri ndị ọzọ;
osisi ndị tojuru etoju (tinyere nso paddock).
Dictyocaulus pathogens on organism of ruminants nwere trophic, na-egbu egbu, inoculatory na mechanical omume, na migratory larvae nke ndị a nematodes mara site na antigenic utịp. N'ime akụkụ ndị ahụ, emetụ ahụ na-emetụ n'ahụ, nke nsogbu nke ọrịa na-ebelata na ọrịa ndị ọzọ na-efe efe pụtara.
Ọ dị mkpa! Nyocha kachasị mma maka ụdị ikpuru na nje ndị ọzọ bụ immunofermental, ọ na-enye 90% nke ihe ịga nke ọma, ma nchọpụta nke ọrịa helminth na feces anaghị eweta nsonaazụ ziri ezi mgbe nile.
Ghọta ọrịa ahụ nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà ndị na - esonụ:
ịda mbà n'obi (na-esite na mgbe ịbanye n'ime ntụpọ n'ime mpempe akwụkwọ mucous nke tractal tract);
akọrọ, ụkwara mgbu (gosipụtara na izu 3 na 4 nke ọrụ dị mkpa nke ikpuru);
mkpụmkpụ nke ume;
esi ike n'oghere imi;
okpukpu aru nke ogo na ogo 40.5-41;
ịjụ iri nri ma ọ bụ agụụ siri ike;
na-ehi ụra (na-abụkarị anụ ahụ na-arịa ọrịa nwere olu elongated, ajar mouth na ire wụsara);
a na-eme mkpọtụ nke ụda.
Ihe omuma nke dictyocaulese Ihe ize ndụ nke ehi dithiocaoleosis bụ nsogbu ndị dị na:
pneumonia catarrhal (nke nwere ụdị ọrịa dị iche iche);
na-agbasa ma ọ bụ na-elekwasị anya na-achọpụta na ọ bụ bronchopneumonia (ụdị dị iche iche);
Ọ bụrụ na emeghị ihe ọ bụla, anụmanụ ahụ nwere ike ịnwụ n'ụbọchị ole na ole ọrịa.
Nri na-ejikarị anụ anụ, n'ihi ya, ị kwesịrị ịma otú e si emeso ọrịa ndị ahụ dị ka teliasiosis, babesiosis, actinomycosis, cysticercosis.
N'ihe na-enyo enyo nke ndị helminthiasis, ndị na-agwọ ọrịa na-enyocha ihe atụ nke nsị ya dị ka usoro Berman-Orlov si chọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ nke anụmanụ. Ọzọkwa, dictacaulaus larvae nwere ike ịchọta ya site n'enyemaka nke nnyocha site na iji nkà na ụzụ larvoscopic dị mfe. Ndị ọkachamara na-ekwu na a ga-ahụ ihe ndị ọrịa ahụ na-ahụ anya, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na a na-etinye ntakịrị tụlee nke ihe ngwọta na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na mbadamba iko. Maka nyochaa ha, a na-eme ka ọgwụ ahụ maa jijiji na obere ọkara nke obere mpempe odo odo na-apụta na mbara igwe. N'ụzọ dị iche, ihe ndị ọzọ na-adịghị ọcha nwere ntụpọ.
Ị ma? Òtù UN kweere na ehi na-eme ihe ka njọ karịa gburugburu ụgbọ ala na ụgbọ elu. A na-akọwa ọkwa dị otú a site na ntọhapụ nke gas, nke ya na ehi na-ebu maka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke methane griin. Ọ na-ekpuchi ụwa 20 ugboro ngwa ngwa karịa carbon dioxide..
Na nchoputa nke oria a, a na-echeba ihe omuma ha. Ọnụnọ nke dictyocaulese na-egosi n'ụzọ doro anya na mmịnye nke imi na ụkwara na-egbu mgbu.
N'ọnọdụ ahụ mgbe ndụ na-echekwa ehi ahụ adịghị ada ada, a na-emepụta nkwonkwo. A na-ahụ larvae Nematode mgbe a na-enyocha trachea na bronchial alveoli.
Dika nje ndi ahu na-aru n'ime oria iku ume, ha na aru oru ha di nma karia ha. N'ihe na-arịa ọrịa anụ ahụ, ọrịa ndị na-esonụ na-egosi ọrịa:
Okenye D. ikpuru na-adọrọ adọrọ na ọrịa nke ehi na-arịa ọrịa
akpọnwụ nke akpụkpọ anụ mucous a na-ahụ anya;
enwere ike ịbanye n'ime obi na abdominal cavities;
ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngụgụ;
ihe nkedo ajuju, ihe ike, "na-agba uba" na agba ocha na-acha uhie uhie nke ebe ndi ahu metutara;
Mmiri ụfụfụ na-egbuke egbuke na lumenial lumen, bụ nke nje nje filamentary na-ebi ndụ;
ọnụnọ nke ọhụụ dị iche iche nke hepatization;
mmụba siri ike na ndị na-anụ ọkụ na nke lymph;
hypremia nke mucous membranes nke trachea na bronchi (mgbe ụfọdụ, e nwere ihe ịrịba ama nke ọbara ọgbụgba);
pọọsụ na-arụ ọrụ na obere ọkara;
Ọ dị mkpa! Na igbochi dictyocaulosis na anụ ụlọ, ọ dị oké mkpa iji mepụta ihe ndị na-eme ka mmiri ozuzo na-arụ ọrụ: ịwa mmiri nke ahịhịa mmiri na ala ịta ahịhịa dị ala, nhazi nke ala ịta ahịhịa dị iche iche, imeziwanye ebe obibi mmiri. Mmiri olulu mmiri na olulu mmiri kwesịrị ịdị mma, na-enweghị ụrọ, akọrọ, na ala siri ike, na mmiri nke mmiri mmiri nkịtị kwesiri ka o sie ike, ya na ụzọ dị mma.
Igwupu parasitic larvae adịghị mfe. Iji mee nke a, nsogbu nke ndị mmadụ kwesịrị inye nri na-edozi ahụ kwesịrị ekwesị, na-akwadebe ụlọ ọrụ dịka usoro ọgwụgwọ anụmanụ si dị, yana ịhazi ndokwa ọgwụ. Tụlee ihe niile ị ga-eme.
Mụta otu esi esi ehi.
Ihe mbụ ị ga-achọ ịṅa ntị na ịdị ọcha nke ụlọ ndina, nke dị n'ụlọ ezumike nká. N'ihe gbasara ọrịa, ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ịmalite ịgwọ ọrịa na ịmecha ụlọ na ọrụ ọrụ:
A na-akwagharị ụmụ anụmanụ nwa oge gaa na-eje ije ma ọ bụ na-arụ ọrụ ọzọ, nakwa na a na-eme ihe ọ bụla nwere ike ime.
Mgbe nke ahụ gasịchara, a na-ehichasị nri, nri na nri nri sitere na feeders.
Site na nchara n'okpuru mmiri siri ike nke mmiri, ha na-ehichapụ pen, na-elekwasị anya na ebe ndị e merụrụ emerụ, akụkụ ndị ọzọ na ebe ndị ọzọ siri ike. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri eriri na brushes.
Mgbe mmiri dị n'ime ụlọ na-akpọnwụ (nke a ga-eme n'egbughị oge), a na-agbapụ mgbidi na ala na-eji bọfọn, na-ejide ngwaọrụ ahụ ruo minit ole na ole. Usoro dị mkpa maka ebe osisi na nkume. A na-emeso ihe ndị e ji ígwè rụọ na ọgwụ ndị na-edozi ahụ. Ọtụtụ ndị nwe ha na-ejikọta anụ ahụ na ọgwụgwọ na-esote ya na ọgwụ preparations chlorine. Mgbe mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, ọ bụ ihe na-achọsi ike ka ha dị ọcha, nke ga-enyere aka izere ọrịa ndị ọzọ.
Echefukwala ichebara ndị na-eri nri na ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ niile, nakwa shọvel, ịkwa.
Ị ma? Azụ na ehi na-aghọ ndị na-eto eto na usoro evolushọn. Ọ malitere n'eziokwu ahụ na ụmụ anụmanụ ndị a enweghị ike ịgba ọsọ ngwa ngwa, ha enweghị ihe ọkpụkpụ na mbọ. Dika nsonaazụ nke usoro ihe omumu ndia, ndi ahu buru ibu nacho uzo ozo iri. Ihe kachasị mma maka ha bụ nhicha na nsị nke anụ anụ ahụ na ebe dị jụụ.
N'ime ụlọ akọrọ na-ekpochapu ọkụ, a na-ekpuchi ala a na-eji 10 cm cm nke ahịhịa ọhụrụ, peat ma ọ bụ sawdust. A na-atụ aro ka a gbanwee ya na ụbọchị ọ bụla, wepụ nsị ehi. Ekwela ka ụlọ ndị omeiwu zọda ụkwụ ha.
Maka ahụ ike nke ehi na oke ehi, ọ dị mkpa na e nwere microclimate n'ọba:
usoro okpomọkụ - + 5 ... + 15 Celsius;
iru mmiri - 60-70%;
ngbanwe nke ikuku - onye na-elekọta ihe dị arọ 17 cu. m / h;
ọnụ ọgụgụ ikuku - 0.5 m / s;
carbon dioxide concentration - 0.25%, amonia - 20 mg / cu. m
Ebe ọ bụ na nematode dictyocaulese larvae na-agagharị na ahihia ma na-ahọrọ ebe obibi na-ekpo ọkụ, ndị ọrụ ugbo aghaghị ịmacha ebe ịta nri na ebe ndị dị ala. A na-ata nri nke ọma na otu oke ehi, ewu, na atụrụ dị oke mma.
Ị ma? Worms, na-abanye n'ime tractestive ahụ, ka ọ ghara ịgbarie, na-echekwa ihe pụrụ iche - mgbochi-enzymes nke na-echebe ha.
Ọ dị mkpa ka ụmụ anụmanụ nweta nri dị mma, nke ga-eme ka ụbụrụ sie ike. Na trough kwesịrị inwe nanị nri ohuru ma dị mma. Ọtụtụ ndị na-amụrụ mkpụrụ na-agha mkpụrụ nke vetch, alfalfa ma ọ bụ clover maka ụlọ ọrụ ha. Na ka ehi wee nweta ihe vitamin na mineral ndị dị mkpa, ha na-eri ya na ọka silge, ihe oriri na-edozi ahụ, ọka bred, bran, fodder mixtures na premixes.
Na-eri nri na n'ọba, anụ ahụ aghaghị ịnweta mmiri. Ọ dị mkpa na ọ dị ọcha. Na maka nke a, ị ga-ehicha ndị na-aṅụ mmanya mgbe niile ma wụsa ha ngwaahịa. Ọ bụ ihe na-adịghị mma na ehi ahụ si n'èzí ahụ pụta. Maka nhazi ihe oriri kwesịrị ekwesị, ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-adụ ọdụ:
Mgbe ulo-ikwū ahụ na-edebe ehi na mmiri, mee ka ụmụ ehi gaa n'ogige ndị a na-akwadebe n'ahịrị, ebe ịta nri na ebe obibi ndị ọzọ maka ụmụ anụmanụ ndị okenye.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ụgbọala ma ọ bụ ìgwè ehi-cell herding na mgbanwe oge nke ebe ịta nri. Ná mmalite oge opupu ihe ubi, a ghaghị ịmegharị plots na ụbọchị 10-12, dị ka okpomoku na-eme - na 5-6 ụbọchị, na July - na 3-4 ụbọchị. A na-ekwe ka a na-enyeghachi ndị na-ebute ọrịa ebe ọ bụ naanị ọnwa 2-3.
Maka na-eri nri ọ dị mkpa iji ebe ịta nri ebe a na-edebebeghị ehi ndị a na-ebute ọrịa kemgbe September n'afọ gara aga.
Mgbe ha na-eje ije na mmalite nke oge opupu ihe ubi, ndị nwe ha na-ebufe ndị na-eto eto gaa n'ebe ahụ dịpụrụ adịpụ site n'ugbo ahụ. Na nso ogige na ala akọrọ na-eme nza na ọnụego nke ihe ruru 25 m² kwa nwa ehi. A ghaghị ịkwado ugbo ihu na ndị na-egbuke egbuke, ndị na-eri nri na ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ.
Na-aguta banyere ọrịa ndị na-ahụkarị nke ehi.
Enweghị iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-agaghị ekwe omume. Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ na ọgwụ ndị na-esonụ:
"Efu" - na - anọchi anya mmiri 40%. Maka ehi, a na-atụ aro ka ị tinye subcutaneously na dosage nke 1.25 ml kwa kilogram 10 nke arọ ahụ, ugboro atọ na nke mbụ, nke abụọ na nke anọ.
Divezid - ngwọta nke mmiri maka nlekọta subcutaneous. Anụ ehi na ehi, a na-eji ọgwụ na-agwọ ọrịa na ọgwụgwọ ọgwụgwọ na 1.5 ml kwa 10 kilogram nke ịdị arọ ndụ, ma ọ bụghị ihe karịrị 20 ml kwa anụ. Tinye ugboro abụọ na oge ọ bụla.
"Ditrazina citrate" - 25% ngwọta mmiri. A na-etinye ya na ntanye 2 ml nke nkwadebe maka kilogram 10 nke arọ ahụ (nkwadebe akọrọ nke 0.05 g / kg), ugboro atọ (na mbụ, nke abụọ na nke anọ).
"Aluminom Ndinidide aerosol" - Ngwurugwu na-adighi adighi ozo nke eji eme ihe dika ndi na-acho ndi ozo dika usoro Loparev. N'ihi nke a, ehi na ehi na-echekwa na ikuku aerosol maka ọkara elekere. A na - eme ugboro abụọ ugboro abụọ, ọgwụgwọ - ugboro atọ na oge nke 2-3 ụbọchị.
"Diktifug" - 20% mmiri ngwọta. E jiri ya mee ihe n'ụzọ na-erughị ala na 15 mg kwa 1 n'arọ nke nwa ehi, na-agbara ya na 1st, 2nd na ụbọchị anọ.
Ọ dị mkpa! Mgbe usoro ọgwụgwọ na ọgwụgwọ nke ọgwụ antihelmintic gasịrị, ndị na-agwọ ọrịa na-adụ ọdụ ka ha ghara ikwe ka ehi nweta nri maka ụbọchị ise. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mkpa ka ị wepụchaa akwụkwọ ahụ ma jiri nlezianya hapụ ya.
Nke a bụ ụzọ kacha mma maka igirigi. Maka nke a, achọrọ ka ị kwadebe ihe ngwọta nke iodine na-esote:
crydalline iodine - 1 g;
potassium iodide - 1.5 g;
mmiri ma ọ bụ sie mmiri - 1 l.
Tụlee na maka kilogram ọ bụla nke anụ ahụ, 0,6 ml nke ọgwụ a kwadebere ga-adị mkpa. Ọ dị mkpa na ọ bụ ọkụ (oke okpomọkụ nke mmiri mmiri bụ + 30 ... +37 ° C.
A na-etinye ọgwụ ngwọta na-adabere n'ụzọ dị ka ntụtụ n'ime akụkụ nke trachea. N'ọnọdụ a, ehi kwesịrị ịdina na steepụ-n'akụkụ ihu na n'akuku 30 Celsius. Otu ụbọchị mgbe e mesịrị, a na-agbanye otu akụkụ nke ayodiyo nke mịdine n'ime akụkụ nke ọzọ n'olu.
Mmetụta nke usoro a nke igirigi bụ oge na-ewe oge. Ya mere, n'ime ugbo buru ibu anaghi eji ya.
Ọrịa ọ bụla dị mfe igbochi karịa ịgwọ. Ya mere, n'ihe gbasara dictyocaules, mgbochi nke oge a dị ezigbo mkpa. Iji mezuo nke a, ndị ọkachamara na-akwado ihe ndị a:
Onye ọ bụla ọ bụla n'ime ọnwa atọ ga-ebu mgbochi nke ụmụ ehi na-eji ọgwụgwọ ọgwụ agwọ ọrịa. E kwesịrị ichebara nlezianya anya iji dysfunctional, ike gwụrụ anu ulo.
Na-eleba anya mgbe niile banyere mmiri na nri, nke na-azụ anụ. Ọ dị mkpa ime ihe iji dozie nri.
Detuo ime ụlọ ahụ, nke nwere ehi na ehi, nyochaa ịdị ọcha ma nyere aka melite anụ ụlọ.
Na na-elekọta nri na-elekọta ndokwa nke ịgbara, nakwa iji chebe ebe ịta nri site na mmeru. Iji mezuo nke a, arụmọrụ dị mma nke ala.
Na-eme mgbanwe dị iche iche nke grazing ma ọ bụ nri nri "Fenothiazine."
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na achọpụtala mgbaàmà nke dictiocaulese, ọ dị mkpa iji kụziere nkuzi ụwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, megharịa ya mgbe ụbọchị 10-12 gasịrị.
Теперь вы знаете, что представляет собой гельминтозное заболевание диктиокаулёз, чем опасны для травоядных личинки диктиокаулюсов, как определить и вылечить болезнь. Ihe ngbochi ga - enyere aka igbochi mmepe nke ọrịa a na ezinụlọ gị.